कमिसनको खेलमा। २ सय श्रमिकलाई एयरपोर्टमै अलपत्र पार्ने मन्त्री - ढोरपाटन पोष्ट
कोरोनाको बाहानामा बिदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई अलपत्र पारेर पोखरेलले सताउनु सताए ।
२०७७ चैत्र १, आईतवार १९:५८
मेघराज सापकोटा,यूएई । नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कुनै प्रसंगमा आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधव नेपाल, माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई घृणा गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
राजनीतिमा बिरोध हुन्छ । ग़लत कार्यको बिरुद्द आवाज बुलन्द हुन्छ । त्यसको लागि ग़लत कार्यहरुको भण्डाफोर गर्दै जनतालाई सुशोचित गरिन्छ ।अनि घृणा नै किन गरिन्छ ? गैरराजनैतीक भए पछि । ब्यक्तिगत कुण्ठा बोके पछि ।सामान्यत श्वस्थ राजनीतिमा ब्यक्तिलाई घृणा नै गरिन्न । ब्यक्तिको प्रबृत्तिको घृणा गरिन्छ । तर पोखरेलले ब्यक्तिलाई घृणा गर्नु भनेर सिकाए ।
राजनीतिमा कसले कसलाई घृणा गर्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा उनीहरुले जान्ने बिषय हो । यसमा धेरै टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन । यदि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने जस्तै बैदेशिक रोजगारीमा गएका ४० लाख जनताले घृणा नै गर्नु परे त्यो पात्र को होला ? नधकाई भन्न सकिन्छ कि ती पात्र अरु कोही नभएर उनी आफैं हुन् अर्थात् ईश्वर पोखरेल !
गत साल भदौ २ गते (अगस्त १८) मा नेपाल एयरलाईन्सको जहाज़ दुबई एयरपोर्टमा २ सय नेपालीहरुलाई एयरपोर्टमै अलपत्र पार्दै रित्तो फर्किएको थियो । हवाई जहाज़ रित्तो फर्काउन आदेश दिने अरु कोही नभएर यिनै मन्त्री पोखरेल थिए ।
सोही दिन यूरोपबाट टर्की हुँदै नेपाल आएको बिमानलाई भने नेपाल आउन अनुमति दिईएको थियो । खाड़ीमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई भने बेवास्ता गरियो । कोरोनाले हाहाकार भएर त्रसित अवस्थामा रहेका नेपाली कामदारहरुलाई आफ्नो घर, आफ्नो मातृभूमि पनि आउन दिईएन । नेपाल जाने भन्दै झिनिभिम्टा बोकेर कोठाबाट बिदा भएका नेपालीहरुलाई एअरपोर्ट मै छोडेर रित्तै उड्न कसरी सकेको होला नेपाल एअरलाइन्स ?
पछि एयरपोर्टमा अलपत्र पारिएका यी नेपालीहरुलाई एनआरएन यूएई र नेपाली समाजले उद्दार गरेका थिए । जानी जानी अलपत्र पारिएका ती श्रमिकहरुले त झन कति घृणा गर्दा होलान् ?यसरी बिमान रित्तो उडेपछि एयरपोर्ट पुगेका कयौं नेपालीहरु बिचल्लीमा परे भने कोरोना चेक गरेर ३ दिनको भ्यालिडिटी पाएका यात्रुहरुले दोहोर्याएर जाँच गर्न लाखौं रुपैंयाको नोक्सानी बेहोरेका थिए ।
गत साल भदौ २ गते (अगस्त १८) मा नेपाल एयरलाईन्सको जहाज़ दुबई एयरपोर्टमा २ सय नेपालीहरुलाई एयरपोर्टमै अलपत्र पार्दै रित्तो फर्किएको थियो । हवाई जहाज़ रित्तो फर्काउन आदेश दिने अरु कोही नभएर कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी)का सँयोजक एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल थिए
यस्तो कार्य अरु कसैको नभएर तत्कालिन कोभिड-१९ उच्चस्तरीय समितीका सँयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको ठाडो निर्देशनमा भएको थियो । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको उक्त कदमको सर्बत्र आलोचना गरियो । गरीब श्रमिकहरुलाई एअरपोर्टमै छोडेर रित्तै उड्नु भनेर निर्देशन दिने उनी नै थिए । यति सम्म कि उक्त निर्देशन दिएको बारे तत्कालिन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराइलाई समेत जानकारी दिईएन श्रम मन्त्री त परैको कुरा । पछि एक टेलिभिजन कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले क्षमा याचना गरे पनि पोखरेलले माफी त परै जाओस आत्माआलोचना पनि गरेनन् ।
दुबई एअरपोर्टमा अलपत्र पारिएका नेपाली श्रमिकहरु
कमिसनको खेलमा सिन्डिकेट तयार गरी चार्टर बिमान उड्न भने अनुमति दिइराखे । तर आफ्नै देशको ध्वजाबाहक बिमान दुबईबाट रित्तै फर्काए ।
कोरोना सम्बन्धि उच्च स्तरीय समिति ‘सिसीएमसी’ का संयोजक रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको अदुरदर्शी र ग़लत निर्णयका कारण लाखौं नेपाली बिदेशमा समस्यामा परेका थिए । कोरोना महामारी शुरु भएको ६ महिना पुग्दा पनि नेपालमा ब्यवस्थित क्वारेन्टाईन् नबनाएर बिदेशका सडकमा भोकै सुत्न बाध्य बनाएका थिए । आख़िर उनले भने जस्तै कोही कसैलाई घृणा नै गर्ने भए बिदेशमा बस्ने हामी श्रमिकहरुको घृणाका पात्र अरु कोही नभएर उनी नै हुन् ।